Articles tagged 'harare south'
Harare South MP warns land barons 8 October 2018 HARARE – Harare South Member of Parliament Tongai Mnangagwa has said he will put an end to land barons in his constituency who have been duping residents of their hard-earned money. “We are going to make sure that all the land barons who were deceiving residents are arrested because they are c...
Zanu PF storm erupts in Harare South 28 April 2018 HARARE - A storm has erupted in Harare South constituency ahead of tomorrow's blood and thunder Zanu PF primary elections after one of the candidates was inexplicably disqualified and replaced with President Emmerson Mnangagwa's nephew, Tongai. Curiously, Tongai Mnangagwa was also previously o...
Kasukuwere feels the heat 24 May 2017 HARARE - It appears as if it does not rain but pours at the moment for under-fire Zanu PF national political commissar Saviour Kasukuwere — with the Local Government minister now facing fresh damaging charges by his party foes, as the ugly war to succeed President Robert Mugabe continues to escal...
Demolition victims resettled in Harare South 29 January 2016 HARARE - Victims of Airport illegal structures demolitions have been resettled in Harare's South's Stoneridge suburb with the MP for the area Shadreck Mashayamombe yesterday appealing to elements resisting the resettlement exercise to heed the government's call. Speaking to the affected famili...
Harare South residents face relocation 27 November 2015 HARARE - Residents allocated stands on land set aside for schools, clinics and commercial centres in Harare South will soon be relocated, the Harare City Council (HCC) has said. HCC spokesperson Michael Chideme said central government had given them the mandate to reorganise suburbs in Harare ...
Don't let political violence spiral out of control 10 November 2015 HARARE - The resurgence of political violence, especially in Harare, is very worrying. Only on Sunday, Harare South was turned into a battle zone as members of rival political parties — notably the MDC and Zanu PF — fought running battles, resulting in the arrest of twenty opposition party sup...